उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा बनाइँदै, नयाँ नियममा के गर्न पाइने के नपाइने? [विज्ञप्तिसहित] « Postpati – News For All
उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा बनाइँदै, नयाँ नियममा के गर्न पाइने के नपाइने? [विज्ञप्तिसहित]
वैशाख २१, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडा हुने भएको छ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले आगामी वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखले जारी गरेको सवारी पास र परिचयपत्रको आधारमा आवतजात गर्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालय मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ र केन्द्रीय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत मात्रै जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । र, सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।